Bulshada diimaha iyo aragti-nololeedka ee Norwey | Samfunnskunnskap.no
Norwey waxa ka jirta xornimo-diimeed oo buuxda.Taas oo macnaheedu yahey in qof kastaa ku dhaqmi karo diintiisa isaga oo aan ka baqaneyn in la dabagalo ama taas lagu ciqaabo. Taas oo macnaheedu yahey in qof kastaa uu dooran karo diinta uu rabo inuu qaato. Sidoo kale waa muhiim in shaqsi waliba uu xor u yahay inuu doorto inuu bilaa diin noqdo haddii uu rabo.
Diinta ugu weyn Norwey waa kiniisadda Norwey. Taas macnaheedu waa in tiir ahaan ay ku jiraan dhammaan iyadoo ku salaynaysa inta carruur loogu magac bixiyey iyo kuwa aan xubimada kala bixin. Ilaa boqolkiiba 70 ayaa xubin taas ka ah. Inkasta oo tirada dadka xubin ka ah kiniisada aad u sarayso hadana Dadka diimaha kala duwan haystaa waxey kaalmo dhaqaale ka helaan dawlada si ey diimahooda u wataan. Dadka naftoodu sidaa uguma xidhna diinta. Laakiin kiniisadu waa u mihiim dadka badankooda sida, magac bixinta, qaangaadhnimda, aroosyada, iyo aaska iyo weliba xusida maalmaha yuulka.
Dadka diimaha kala duwan haystaa waxey kaalmo dhaqaale ka helaan dawlada si ay diimahooda u wataan.
Bulshada diimaha- iyo aragtiyaha nolasha aaminsan waxey caawimo dhaqaale ka heli karaan dawlada iyo degmada. Bulshada diimaha iyo aragtiyaha nolasha aaminsan ee la aqoonsanyahey waxa lagu siiyaa dhaqaale xubnaha inta la siiyo kuwa ka tirsan kiniisada noorwiijanka.
Norwey waa dal dhaqamo kala duwan leh bulshaduna waa mid aan diinta ku salaysnayn
Norwey waxey masiixi noqotay qiyaastii 1000 sano ka hor. Laga bilaabo qarnigii is bedelka ee 1500kii waxa Norwey lagu haystay mahdabta luutarka ee kiristaanka borotestaanka ah (protestantisme).
Berigii hore mamnuuc ayey aheyd in qofku ka baxo diinta kiniisada qaranka, oo qiyaastii sanadkii 1850kii ayaa la ogolaadey in dadka aan masiixiga aheym ee wax kale caabudaa ay ku dhaqmi karaan oo ay urur diineed ka samaystaan Norwey.
Maanta bulshadu waxey isu bedeshay mid ka sii durkaysa diinta. Taas macnaheedu waxa weeye in bulshada macne wayn aanay diintu u sameyn sidii berigii hore oo kale, dadka shakhsiyaadka ah iyo marka sharciyada dawladaba la sameynayaba.
Kala duwanaansho diimeed iyo kooxo aragtiyo diimeed ee Norwey
Qiyaastii boqolkiiba 30 dadka Norwey ku nooli kama tirsana kiniisada dadka. Qiyaastii kala badh kuwani waxey xubin ka yihiin bulsho diimeed ama ururada aragtida nolosha aaminsan, halka kala badhka kale aanay ka tirsanayn wax urur ah oo kale.
Kuwa ka tirsan bulsho-diimed iyo ururada aaminsan arigtiyaha nolosha ee ka baxsan kiniisadda noorwiijigu waxay u kala baxaan sidan:
Kiniisadda Norwey waa kiniisad bulsho. Waa bulsho-diimeedka ugu weyn ee Norwey waxaanay ku dhaqantaa mad-habta masiixiga ee luterka borotestenka.
Hore waxa ay u ahaan jirtay kiniisadda noorwiijanku kiniisadda qaranka Norwey.
Norwey hadda malaha wax diin-dawladeed ah.